An’ny Malagasy i Madagasikara | NewsMada
An’ny Malagasy i Madagasikara
Tena tsara, mba tsy ilazana hoe tonga lafatra! Tsy nisy tsy niloa-bava sy nahatsiaro volivolin’ny fahatsiarovana ny fahiny sy ny fihetseham-pon’ny ankehitriny ireo rehetra nijery ny fampisehoana notontosaina tetsy Antsahamanitra ny faran’ny herinandro teo. Matoa mipoitra ny tahaka izany, nandona ny fo sy ny saina amam-panahy ny zavatra hitan’ny maso sy ren’ny sofina. Na tany ambadiky ny 30 taona na 40 taona lasa aza no nivoahan’ny vazo kaiamba, tsapa fa kolontsaina malagasy tsy manam-paharoa izy io.
Raha ny fandinihan’ny mpahay momba ny fiarahamonina sasany, « tsy manana olona atao fitaratra ny Malagasy ». Tsy vitsy ihany koa ny mpanakanto no miteny tahaka io. Ny hafa amin’ireo aza milaza fa « noho io tsy fananana olona atao fitaratra io no mahatonga ny zavakanto malagasy ankehitriny mitsingevana sy ratsy fototra ». Amin’ny lafiny iray, marina ny fomba fijery tahaka izany. Raha ny tazana tetsy Antsahamanitra anefa, tena manana mpanakanto sy zavakanto azo atao fitaratra tsara tokoa ny Malagasy.
… Saingy ny olana eto Madagasikara, tsy ampy ny fampahafantarana ny mpanakanto sy ny kanto tahaka ireny. Ny haino aman-jery, zara raha mandefa ireo hira tsy manam-paharoa toy ny vazo kaiamba, bagasy, zafindraony, vakodrazana, kalon’ny omaly, sns. Ny mpikarakara fampisehoana, indray mandeha ao anatin’ny taona vao mahatsiaro ny fisian’ireny… Ny ray aman-dreny zara raha mampita sy mampahafantatra ny ankizy sy ny tanora ny maha izy azy ny Malagasy. Tranga mateti-piseho aza, ny vahiny indray no miezaka mampahafantatra ny kolontsaina malagasy. Ireo rehetra ireo, lesoka mila harenina avokoa. Miainga ao amin’ny ankohonana, fianakaviana, fiarahamonina, firenena, mila mahafantatra ny maha izy azy. Tsy amin’ny kolontsaina ihany fa amin-java-drehetra mihitsy. Raha io no tanteraka, izay vao tena an’ ny Malagasy tokoa i Madagasikara. Diniho anie e !